Quatrième unité de protection civile
Fanomezana avy amin’ny Ambatovy
Naotolotra tamin'ny fomba ofisialy, ny faha 3 ny volana jiona 2016 lasa teo ny sampam-piarovana sivily ato anatin’ny faritra Atsinanana, fanomezana avy tamin'ny orinasa Ambatovy. Ahitana trano arifomba miisa enina, mba hiatrehana amin’ireo loza eo amin'ny lafiny teknolojia na ny loza voajanahary izay mety hitranga aty amin'ny faritra, fitaovana sy ireo fanaka ,fitaovana ilaina amin'ny fanofanana eo amin'ny vonjitaitra ary fiara fito ahafahana mirotsaka avy hatrany raha misy ny loza.
Fanomeza mitentina iray tapitrisa dollar fitaova rehetra notolotra izao izay novatsiana tamin'ny alalany tahirin’ny Ambatovy ho an’ny tetikasa sosialy sy ny fananganana ny fotodrafitrasa.
Eo amin'ny maha mpandraraha sangany ara-toekarena azy, Ambatovy dia mandray anjara amin'ny asa sosialy na eo aza ny olana lalovany orinasa amin’izao, ny fidinan’ny vidin’ny nickel sy cobalt eo amin'ny tsena iraisampirenena, dia manolotra ny anjara birikiny hatrany izahay hoy ny filoha mpitantana an'ny Ambatovy Atoa Tim Dobson nandritry ny lanonam-panolorana.
Tonga nandray ny fanolora sy no nanome voninahitry ny lanonana ny filoham-pirenena Malagasy Atoa Hery RAJANARIMAMPIANINA sy ny minisitrin’ny foloalindahy ary ireo manankaja maro. Tsiahivina fa tamin’ny taona 2012 no napetraka ny tahirin'ny Ambatovy ho any tetikasa sosialy sy fotodrafitrasa mitentina 25 tapitrisa dolara amin'ny faritra iasan'ny orinasa, ary efa betsaka ny fanorenana nampiasana an’io vola io isan’ny fanavaozana ny Bazary Be Toamasina.
(132) VAVIROA Marcelline : 27-06-2016 - 10:22